Izindaba - Ngaphansi komnotho oluhlaza, imikhiqizo yokupakisha ingilazi efana namabhodlela engilazi ingahle ibe namathuba amasha
Ngaphansi komnotho oluhlaza, imikhiqizo yokupakisha ingilazi efana namabhodlela engilazi ingahle ibe namathuba amasha
Njengamanje, "ukungcoliswa kwabamhlophe" sekuya ngokuya kwaba yinkinga yezenhlalo ekhathaza kakhulu kuwo wonke amazwe emhlabeni. Into eyodwa noma ezimbili zingabonakala ekucindezelweni okwandayo kwezwe lami ekuvikelweni kwemvelo. Ngaphansi kwenselelo enkulu yokusinda kokungcola komoya, izwe ligxile ekubukeni kwalo kwezentuthuko kumnotho wezemvelo. Amabhizinisi abuye anake kakhulu ukuthuthukiswa nokwenyuswa kwemikhiqizo eluhlaza. Ukufunwa kwezimakethe kanye nokuzibophezela kwezenhlalo ndawonye kubelethe inqwaba yamabhizinisi anemfanelo alandela izindlela zokukhiqiza okuluhlaza.
Ingilazi ivumelanisa nezidingo zokumakethwa kokulungiswa kwengilazi nokuhlaza. Ibizwa ngokuthi uhlobo olusha lwezinto zokupakisha ngenxa yokuvikelwa kwayo kwezemvelo, ukuvala umoya kahle, ukumelana nokushisa okuphezulu, nokuvala inzalo kalula, futhi kunesabelo esithile emakethe. Ngakolunye uhlangothi, ngokwanda kokuqwashiswa kwabahlali ngokuvikelwa kwemvelo kanye nokongiwa kwemithombo, iziqukathi zokupakisha ingilazi ziye zaba yizinto zokupakisha ezikhuthazwa nguhulumeni, nokuqashelwa kwabathengi kweziqukathi zokupakisha ingilazi nakho bekuyanda.
Isitsha esibizwa ngokuthi ingilazi yokupakisha, njengoba igama lisho, yisiqukathi esisobala esenziwe ngengilazi encibilikisiwe ngokushaywa nokubunjwa. Uma kuqhathaniswa nokupakisha kwendabuko, kunezinzuzo zokushintshwa kwempahla encane, ukugqwala okuhle nokumelana nokugqwala kwe-asidi, isithiyo esihle nomphumela wokufaka uphawu, futhi kungakhiqizwa kuhhavini. Ngakho-ke, isetshenziswa kakhulu kuziphuzo, emithini nakweminye imikhakha. Eminyakeni yamuva nje, yize ukufunwa kweziqukathi zokupakisha ingilazi emakethe yamazwe omhlaba kukhombise ukwehla, iziqukathi zokupakisha ingilazi zisakhula ngokushesha maqondana nokupakisha nokugcinwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zotshwala, okokufaka ukudla, ama-reagents amakhemikhali nezinye izidingo zansuku zonke.
Ezingeni likazwelonke, ngokuqhubeka okuqhubekayo "kwezinguquko zokwakha eziseceleni" kanye "nokuqinisa izimpi zokuvikelwa kwemvelo" nokufinyelela okuqinile kule mboni, izwe lami lethule inqubomgomo yokufinyelela yomkhakha wengilazi osetshenziswa nsuku zonke ukulawula umkhiqizo , ukusebenza nokusebenza kokutshalwa kwemali kwemboni yengilazi esetshenziswa nsuku zonke. Thuthukisa ukonga amandla, ukunciphisa ukungcola nokukhiqiza okuhlanzekile, futhi uqondise imboni yengilazi yansuku zonke ukuze ithuthuke ibe yimboni yokonga izinsiza kanye nemvelo.
Ezingeni lemakethe, ukuze kuvunyelwane nomncintiswano onamandla emakethe yokupakisha yomhlaba wonke, abanye abakhiqizi bezingilazi zokupakisha izingilazi zangaphandle kanye neminyango yocwaningo lwesayensi bayaqhubeka nokwethula imishini emisha nokwamukela ubuchwepheshe obusha, obenze inqubekela phambili enkulu ekwenzeni iziqukathi zokupakisha ingilazi. Umphumela ophelele weziqukathi zokupakisha ingilazi ugcine ukukhula okuqhubekayo. Ngokuya ngezibalo ezivela ku-Qianzhan.com, ngokukhula kokusetshenziswa kotshwala obuhlukahlukene, kulindeleke ukuthi okukhishwayo ku-2018 kukhuphuke kuye kumathani ayi-19,703,400.
Ngokukhuluma ngokuhlosiwe, isilinganiso sonke somkhakha wokukhiqiza ingilazi yokupakisha siqhubeka nokukhula, futhi namandla kazwelonke okukhiqiza iziqukathi zokupakisha ingilazi ayanda ngokushesha. Kumele kuqashelwe ukuthi iziqukathi zokupakisha ingilazi nazo zinamaphutha athile, futhi okulula ukugqashuka kungenye yeziphambeko. Ngakho-ke, inkomba yokumelana nomthelela wamabhodlela engilazi namathini sekuyinto ebalulekile yokuhlola.
Ngaphansi kwezimo ezithile zokuqinisekisa amandla okupakishwa kwengilazi, ukunciphisa isilinganiso sesisindo-to-ivolumu yamabhodlela engilazi ukuthuthukisa ukuba luhlaza kwawo kanye nomnotho. Ngasikhathi sinye, ukunakwa kufanele futhi kukhokhwe kokungasindi kokufakwa kwengilazi. Ukufakwa kwamabhodlela engilazi kuthathe ngokushesha ingxenye yezimakethe ngochungechunge lwezakhiwo zomzimba nezamakhemikhali ezinjengokuqina kwamakhemikhali, ukuqina komoya, ubushelelezi kanye nokwenza izinto obala, ukumelana nokushisa okuphezulu, kanye nokubulala amagciwane okulula kokufakwa kwengilazi. Ngokuzayo, iziqukathi zokupakisha ingilazi nakanjani zizoba namathemba abanzi entuthuko.
Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo, Sula Amabhodlela e-Glass Pump, Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha, Glass Bottle Nge Spray Pump, Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile,